Ny bokin’i Almà Zanakalahin’i Almà
Ny fitantaran’i Almà izay zanakalahin’i Almà, lohan’ny mpitsara voalohany tamin’ny vahoakan’i Nefia ary koa mpisorona avo tamin’ny fiangonana. Ny tantaran’ny fitondran’ireo mpitsara sy ny ady ary ny fifandirana teo anivon’ny vahoaka. Ary koa ny fitantarana ny ady teo amin’ny Nefita sy ny Lamanita, araka ny rakitsoratr’i Almà, ilay lohan’ny mpitsara voalohany.
Nampianatra fotopampianarana sandoka, nanorina fiangonana iray, nampiditra ny komiberaky ny mpisorona ary namono an’i Gideôna i Nehôra—Novonoina i Nehôra noho ny helony—Niely tany anivon’ny vahoaka ny komiberaky ny mpisorona sy ny fanenjehana—Namelon-tena ny mpisorona, niahy ny mahantra ny vahoaka, nandroso ny fiangonana. Tokony ho 91–88 taona talohan’i Kristy.
Nikatsaka ny ho mpanjaka i Amlisia ary nolavin’ny feon’ny vahoaka—Nanangana azy ho mpanjaka ny mpanara-dia azy—Namaky ady tamin’ny Nefita ny Amlisita ary resy—Nanambatra ny heriny ny Lamanita sy ny Amlisita ary resy—Novonoin’i Almà i Amlisia. Tokony ho 87 taona talohan’i Kristy.
Efa nanisy marika ny tenany ny Amlisita araka ny teny faminaniana—Efa nozonina ny Lamanita noho ny fikomiany—Ny olona ihany no nahatonga ny ozona hianjera amin’ny tenany—Nandresy miaramila Lamanita hafa ny Nefita. Tokony ho 87–86 taona talohan’i Kristy.
Nanao batisa ireo niova fo an’arivony i Almà—Niditra ny fiangonana ny heloka, ary dia voasakantsakana ny fandrosoan’ny fiangonana—Voatendry ho lohan’ny mpitsara i Nefihà—Nanokan-tena ho amin’ny asa fanompoana i Almà araka ny maha-mpisorona avo azy. Tokony ho 86–83 taona talohan’i Kristy.
Ny teny izay nataon’i Almà, Mpisorona Avo araka ny lamina masin’ Andriamanitra, tamin’ny vahoaka tany amin’ireo tanànany sy vohiny nanerana ny tany.
Manomboka amin’ny toko 5.
Mba hahazoana ny famonjena, ny olona dia tsy maintsy mibebaka sy mitandrina ny didy, ateraka indray, manadio ny fitafiany amin’ny ran’i Kristy, manetry tena, ary manaisotra ny avonavona sy ny fitsiriritana hiala amin’ny tenany, ary manao ny asan’ny fahamarinana—Miantso ny olony ny mpiandry ondry tsara—Ireo izay manao ny asa ratsy no zanaky ny devoly—Nanambara ny amin’ny fahamarinan’ny fampianarany i Almà sady nandidy ny olona hibebaka—Hosoratana ao amin’ny bokin’ny fiainana ny anaran’ny marina. Tokony ho 83 taona talohan’i Kristy.
Voadio sy voalamina ny fiangonana tao Zarahemlà—Nandeha tany Gideôna i Almà mba hitory. Tokony ho 83 taona talohan’i Kristy.
Ny tenin’i Almà izay nolazainy tamin’ny mponina tao Gideôna, araka ny rakitsorany ihany.
Mahafaoka ny toko 7.
Haterak’i Maria i Kristy—Hamaha ny famatoran’ny fahafatesana Izy ary hitondra ny fahotan’ny olony—Ireo izay mibebaka, vita batisa, ary mitandrina ny didy no hahazo ny fiainana mandrakizay—Tsy afaka mandova ny fanjakan’ Andriamanitra ny fahalotoana—Fanetrentena, finoana, fanantenana, ary fiantrana no takiana. Tokony ho 83 taona talohan’i Kristy.
Nitory sy nanao batisa tao Meleka i Almà—Nolavin’ny tao Amônihà izy ka lasa—Anjely iray no nandidy azy hiverina sy hitory fibebahana amin’ny vahoaka—Noraisin’i Amioleka izy, ka izy roa lahy no nitory tao Amônihà—Tokony ho 82 taona talohan’i Kristy.
Ny tenin’i Almà ary koa ny tenin’i Amioleka nolazaina ny vahoaka izay tany an-tanin’i Amônihà. Ary izy ireo koa dia naiditra am-ponja, ary nafahan’ny herin’ Andriamanitra mahagaga izay tao aminy, araka ny rakitsoratr’i Almà.
Mahafaoka ny toko 9 ka hatramin’ny 14.
Nandidy ny mponin’i Amônihà hibebaka i Almà—Ho feno famindram-po amin’ny Lamanita ny Tompo amin’ny andro farany—Ny fahafoizan’ny Nefita ny fahazavana dia handravan’ny Lamanita azy—Ho avy tsy ho ela ny Zanak’ Andriamanitra—Izy no hanavotra ireo izay mibebaka, vita batisa, ary manana ny finoana ny anarany. Tokony ho 82 taona talohan’i Kristy.
Avy amin’ny taranak’i Manase i Lehia—Nitantara ny didin’ilay anjely mba hikarakarany an’i Almà i Amioleka—Nahatonga ny olona ho voatsimbina ny fivavaky ny marina—Ny mpahay lalàna sy ny mpitsara tsy marina no nandatsaka ny fanorenan’ny faharavan’ny vahoaka. Tokony ho 82 taona talohan’i Kristy.
Aroso etoana ny rafi-bola Nefita—Nifanditra tamin’i Zezrôma i Amioleka—Tsy hamonjy ny olona ao anatin’ny otany i Kristy—Ireo izay mandova ny fanjakan’ny lanitra ihany no voavonjy—Hitsangana ho tsy mety maty ny olona rehetra—Tsy misy fahafatesana aorian’ny fitsanganana amin’ny maty. Tokony ho 82 taona talohan’i Kristy.
Niresaka tamin’i Zezrôma i Almà—Ny misterin’ Andriamanitra dia tsy azo omena afa-tsy ireo mahatoky—Tsaraina araka ny eritreriny, ny finoany, ny teniny ary ny asany ny olona—Hiaritra ny fahafatesana ara-panahy ny ratsy—Fotoana fizahan-toetra ity fiainana an-tany ity—Ny drafitry ny fanavotana no manatanteraka ny fitsanganana amin’ny maty ary ny famelana ny fahotana amin’ny alalan’ny finoana—Izay mibebaka dia manan-jo amin’ny famindram-po amin’ny alalan’ny Zanaka Lahitokana. Tokony ho 82 taona talohan’i Kristy.
Antsoina ho mpisorona avo ny lehilahy noho ny finoany fatratra sy ny asa soany—Tokony hampianatra ny didy izy ireo—Amasinina amin’ny fahamarinana izy ary miditra ao amin’ny fitsaharan’ny Tompo—Anankiray tamin’izy ireo i Melkizedeka—Nanambara vaovao mahafaly eran’ny tany ny anjely—Hanambara ny tena fiavian’i Kristy izy. Tokony ho 82 taona talohan’i Kristy.
Naiditra am-ponja sy nokapohina i Almà sy i Amioleka—Nodorana tamin’ny afo ny mpino sy ny soratra masiny—Noraisin’ny Tompo tamim-boninahitra ireo maritiora ireo—Nitresaka sy nirodana ny rindrin’ny fonja—Nafahana i Almà sy i Amioleka, ary voavono ny mpanenjika azy ireo. Tokony ho 82–81 taona talohan’i Kristy.
Nandeha nankany Sidôma i Almà sy i Amioleka ary nanorina fiangonana anankiray—Nositranin’i Almà i Zezrôma izay nilatsaka ho isan’ny Fiangonana—Maro ny natao batisa, ary nandroso ny Fiangonana—Nandeha nankany Zarahemlà i Almà sy i Amioleka. Tokony ho 81 taona talohan’i Kristy.
Namongotra ny mponin’i Amônihà ny Lamanita—Nitarika ny Nefita tamin’ny fandresena ny Lamanita i Zôrama—Nitory ny teny i Almà sy i Amioleka ary ireo maro hafa—Nampianariny fa aorian’ny Fitsanganany amin’ny maty dia hiseho amin’ny Nefita i Kristy. Tokony ho 81–77 taona talohan’i Kristy.
Ny tantaran’ny zanakalahin’i Môzià, izay nandà ny zony ho mpanjaka, noho ny tenin’ Andriamanitra, ary nandeha niakatra tany an-tanin’i Nefia mba hitory amin’ny Lamanita; ny fijaliany sy ny fanafahana azy ireo—araka ny rakitsoratr’i Almà.
Mahafaoka ny toko 17 ka hatramin’ny 27.
Nanana ny fanahin’ny faminaniana sy ny fanambarana ny zanakalahin’i Môzià—Samy nandeha araka ny lalany avy izy ireo hitory ny teny amin’ny Lamanita—Nandeha nankany an-tanin’i Ismaela i Amôna ary tonga mpanompon’i Lamônia Mpanjaka—Namonjy ny andian’ondrin’ny mpanjaka i Amôna ary namono ny fahavalony teo amin’ny ranon’i Sebo. Andininy 1–3, tokony ho 77 taona talohan’i Kristy; andininy 4, tokony ho 91–77 taona talohan’i Kristy; ary andininy 5–39, tokony ho 91 taona talohan’i Kristy.
Nihevitra i Lamônia Mpanjaka fa i Amôna no ilay Fanahy Lehibe—Nampianarin’i Amôna ny mpanjaka ny momba ny Fahariana, sy ny fifandraisan’ Andriamanitra amin’ny olona ary ny fanavotana izay ho avy amin’ny alalan’i Kristy—Nino i Lamônia ary lavo tamin’ny tany miova tsy toy ny maty izy. Tokony ho 90 taona talohan’i Kristy.
Nandray ny fahazavan’ny fiainana maharitra mandrakizay i Lamônia ary nahita ny Mpanavotra—Lavo sy nisehoam-pahitana ny ankohonany, ary maro no nahita anjely—Notsimbinina tamim-pahagagana tokoa i Amôna—Nataony batisa ny maro ary naoriny ny fiangonana iray teo anivony—Tokony ho 90 taona talohan’i Kristy.
Nandefa an’i Amôna tany Midônia ny Tompo mba hanafaka ny rahalahiny voafonja—Nihaona tamin’ny rain’i Lamônia izay mpanjaka nanerana ny tany rehetra i Amôna sy i Lamônia—Nanery ilay lahiantitra mpanjaka i Amôna hanaiky ny hanafaka ny rahalahiny. Tokony ho 90 taona talohan’i Kristy.
Fitantarana ny fitorian’i Aharôna sy i Molôkia ary ny rahalahiny tamin’ny Lamanita.
Mahafaoka ny toko 21 hatramin’ny 25.
Nampianatra ny Amalekita ny momba an’i Kristy sy ny Sorompanavotany i Aharôna—Voafonja any Midônia i Aharôna sy ny rahalahiny—Taorian’ny fanafahana azy ireo, dia nampianatra tao amin’ny sinagoga izy ireo ary nampiova fo ny maro—Nomen’i Lamônia fahafahana ara-pivavahana ny vahoaka any an-tanin’i Ismaela. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Nampianatra ny rain’i Lamônia momba ny Fahariana, ny Fahalavoan’i Adama ary ny drafitry ny fanavotana amin’ny alalan’i Kristy i Aharôna—Niova fo ny mpanjaka sy ny ankohonany rehetra—Azavaina ny fizaran-tany eo amin’ny Nefita sy ny Lamanita. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Fanambarana ny fahalalahana ara-pivavahana—Niova fo ny Lamanita teo amin’ny tany sy ny tanàna fito—Nantsoiny hoe Antia-Nefia-Lehia ny tenany, ary nafahana tamin’ny ozona izy—Nandà ny marina ny Amalekita sy ny Amiolônita. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Tonga nanafika ny vahoakan’ Andriamanitra ny Lamanita—Niravoravo tao amin’i Kristy ny Antia-Nefia-Lehia ary novangian’ny anjely—Nofidiany ny hiaritra fahafatesana toy izay ny hiaro ny tenany—Nihamaro kokoa ny Lamanita niova fo. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Niely ny fanafihan’ny Lamanita—Fongana ny taranaky ny mpisoron’i Noà araka ny naminanian’i Abinadia izany—Maro ny Lamanita niova fo sy nikambana tamin’ny vahoaka Antia-Nefia-Lehia—Nino an’i Kristy izy ary nitandrina ny lalàn’i Mosesy. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Nirehareha tao amin’ny Tompo i Amôna—Nampaherezin’ny Tompo ny olo-mahatoky ary nomena fahalalana—Tamin’ny finoana no nahazoan’ny olona nitondra fanahy an’arivony ho amin’ny fibebahana—Manana ny fahefana rehetra ary mahatakatra ny zava-drehetra Andriamanitra. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Nandidy an’i Amôna ny Tompo hitarika ny vahoaka Antia-Nefia-Lehia hankamin’ny toerana azo antoka—Nandany ny herin’i Amôna ny hafaliany tamin’ny fihaonany tamin’i Almà—Nomen’ny Nefita ny Antia-Nefia-Lehia ny tanin’i Jersôna—Nantsoina hoe ny vahoakan’i Amôna izy. Tokony ho 90–77 taona talohan’i Kristy.
Ny nandresena ny Lamanita tamin’ny ady goaibe—An’alinalina no voavono—Ahiboka ao amin’ny toetry ny fahoriana tsisy farany ny olon-dratsy; ny fahatratraran’ny marina ny fiadanana tsy mifarana na oviana na oviana. Tokony ho 77–76 taona talohan’i Kristy.
Naniry ny hiantsoantso fibebahana araka ny fahazotoan’ny anjely i Almà—Nomen’ny Tompo mpampianatra ny firenena rehetra—Nirehareha ny amin’ny asan’ny Tompo sy ny amin’ny fahombiazan’i Amôna sy ny rahalahiny i Almà. Tokony ho 76 taona talohan’i Kristy.
I Kôrihôra ilay antikristy dia namingavinga an’i Kristy, ny Sorompanavotana, ary ny fanahin’ny faminaniana—Nampianariny fa tsy misy Andriamanitra, tsy misy ny fahalavoan’ny olona, tsy misy ny famaizana noho ny ota, ary tsy misy i Kristy—Nambaran’i Almà fa ho avy i Kristy, ary ny zavatra rehetra dia maneho fa misy Andriamanitra—Nangataka famantarana i Kôrihôra, ary nozoin’ny hamoanana izy—Efa niseho tamin’i Kôrihôra toy ny anjely ny devoly sy nampianatra azy izay holazainy—Voahosihosy i Kôrihôra ary maty. Tokony ho 76–74 taona talohan’i Kristy.
Nitarika iraka hamerina ny Zôramita nihemotra i Almà—Ny Zôramita dia nandà an’i Kristy, nino ny fiheverana diso momba ny fifidianana ary nidera tamin’ny fivavahana piliavava—Heniky ny Fanahy Masina ireo misiônera—Voatelin’ny hafaliana ao amin’i Kristy ny fahoriany. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Nampianatra ny mahantra izay efa naetrin’ny fahoriana i Almà—Ny finoana dia fanantenana ny amin’izay tsy hita nefa marina—Nambaran’i Almà fa ny anjely dia nampianatra ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy—Nampitaha ny teny tamin’ny voa iray i Almà—Tsy maintsy ambolena sy fahanana izy—Rehefa izany dia tonga hazo izay iotazana ny voan’ny fiainana mandrakizay izy. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Nampianatra i Zenôsa fa ny olona dia tokony hivavaka sy hidera amin’ny toerana rehetra, ary ny famaliana dia nahodina hiala noho ny Zanaka—Nampianatra i Zenôka fa ny famindram-po dia nomena noho ny Zanaka—Efa nanangana ny tandindon’ny Zanak’ Andriamanitra tany an-tany foana i Mosesy. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Nambaran’i Amioleka fa ny teny dia ao amin’i Kristy ho famonjena—Raha tsy atao ny sorompanavotana dia tsy maintsy ho fongana ny olombelona rehetra—Ny lalàn’i Mosesy iray manontolo dia manondro ny soron’ny Zanak’ Andriamanitra—Ny drafitra mandrakizain’ny fanavotana dia mifototra amin’ny finoana sy ny fibebahana—Mivavaha ho an’ny fitahiana ara-nofo sy ara-panahy—Izao fiainana izao no fotoana hiomanan’ny olona hihaona amin’ Andriamanitra—Miasà ho amin’ny famonjena anareo amin’ny fahatahorana eo anoloan’ Andriamanitra. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Nandrava ny komiberaky ny Zôramita ny fitoriana ny teny—Noroahiny ireo niova fo izay nikambana tamin’ny vahoakan’i Amôna tany Jersôna tamin’izay—Nalahelo i Almà noho ny faharatsian’ny vahoaka. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Ny didin’i Almà tamin’i Helamàna zanany lahy.
Mahafoaka ny toko 36 sy 37.
Nambaran’i Almà tamin’i Helamàna ny amin’ny fiova-pony taorian’ny nahitany anjely iray—Niaritra ny fanaintainan’ny fanahy voaozona izy; niantso ny anaran’i Jesoa izy ary naterak’ Andriamanitra tamin’izay—Heniky ny fifaliana mamy ny fanahiny—Nahita andian’anjely nitsaoka an’ Andriamanitra izy—Niova fo maro no efa nanandrana sy nahita toy ny efa nanandramany sy nahitany. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Notsimbinina ny takela-barahina sy ny soratra masina hafa mba hitondra fanahy hankamin’ny famonjena—Nofongorana ny Jaredita noho ny faharatsiany—Ny fianianany sy ny dinany an-tsokosoko dia tsy maintsy nafenina tamin’ny vahoaka—Milà hevitra amin’ny Tompo amin’ny ataonareo rehetra—Toy ny nitarihin’ny Liahônà ny Nefita no itarihin’ny tenin’i Kristy ny olona hankany amin’ny fiainana mandrakizay. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Ny didin’i Almà tamin’i Siblôna zanany lahy.
Mahafaoka ny toko 38.
Nenjehina i Siblôna noho ny fahamarinana—Ny famonjena dia ao amin’i Kristy, izay fiainana sy fahazavan’izao tontolo izao—Fehezo ny filànareo rehetra. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Ny didin’i Almà tamin’i Kôriantôna zanany lahy.
Mahafaoka ny toko 39 hatramin’ny 42.
Fahavetavetana ny fahalotoana ara-pitondrantena—Nisakana ny Zôramita tsy handray ny teny ny fahotan’i Kôriantôna—Ny fanavotan’i Kristy dia mihatra amin’ny lasa ho famonjena ireo nahatoky izay niaina talohan’izany. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Manatanteraka ny fitsanganan’ny olon-drehetra amin’ny maty i Kristy—Ny marina izay nodimandry no mandeha any am-paradisa, ary ny ratsy any amin’ny haizina ivelany, mba hiandry ny andron’ny fitsanganany amin’ny maty—Haverina amin’ny endriny tsirairay avy sy tomombana ny zava-drehetra amin’ny fitsanganana amin’ny maty. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Mitsangana ho amin’ny toetry ny fahasambarana tsisy farany na fahoriana tsisy farany ny olona amin’ny Fitsanganana amin’ny maty—Tsy fahasambarana na oviana na oviana ny faharatsiana—Ny olon’ny nofo dia tsy manana an’ Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao—Amin’ny Famerenana amin’ny laoniny, ny olona tsirairay dia mandray indray ny endrika sy ny toetra nananany tamin’ny fiainana mety maty. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Ny fiainana mety maty dia fotoana fizahan-toetra mba hahafahan’ny olona mibebaka sy manompo an’ Andriamanitra—Nitondra ny fahafatesan’ny vatana sy ny fahafatesana ara-panahy tamin’ny olombelona rehetra ny Fahalavoana—Tonga tamin’ny alalan’ny fibebahana ny fanavotana—Izy Andriamanitra tenany no nanonitra ny fahotan’izao tontolo izao—Ho an’ireo izay mibebaka ny famindram-po—Ny hafa rehetra dia fehezin’ny fitsaran’ Andriamanitra—Tonga noho ny Sorompanavotana ny famindram-po—Ny tena mivalo ihany no voavonjy. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Nitory ny teny i Almà sy ny zanany lahy—Nanjary Lamanita ny Zôramita sy ny mpiendaka Nefita hafa—Tonga hiady tamin’ny Nefita ny Lamanita—Nampirongo fitaovam-piarovan-tena ny Nefita i Môrônia—Nambaran’ny Tompo tamin’i Almà ny tetikadin’ny Lamanita—Niaro ny fonenany, ny fahafahany, ny ankohonany ary ny fivavahany ny Nefita—Nohodidinin’ny miaramilan’i Môrônia sy i Lehia ny Lamanita. Tokony ho 74 taona talohan’i Kristy.
Nandidy ny Lamanita i Môrônia hanao ny dinan’ny fandriampahalemana, fa raha tsy izany dia hofongorana—Nitsipaka ilay tolo-kevitra i Zerahemnà, ary nitohy ny ady—Nandresy ny Lamanita ny miaramilan’i Môrônia. Tokony ho 74–73 taona talohan’i Kristy.
Ny tantaran’ny vahoakan’i Nefia sy ny adiny ary ny fisaraham-bazany, tamin’ny andron’i Helamàna, araka ny rakitsoratr’i Helamàna, izay notanany tamin’ny androny.
Mahafaoka ny toko 45 hatramin’ny 62.
Nino ny tenin’i Almà i Helamàna—Naminany ny famongorana ny Nefita i Almà—Nitso-drano sy nanozona ny tany izy—Mety ho nalain’ny Fanahy hiakatra toa an’i Mosesy i Almà—Nitombo ny fisaraham-bazana tao amin’ny fiangonana. Tokony ho 73 taona talohan’i Kristy.
Nioko mba ho mpanjaka i Amalikià—Nanangana ny fanevan’ny fahafahana i Môrônia—Namory ny vahoaka izy mba hiaro ny fivavahany—Antsoina hoe Kristiana ny tena mpino—Hotsimbinina ny taranak’i Josefa sisa—Nandositra tany an-tanin’i Nefia i Amalikià sy ny mpiendaka—Novonoina ho faty ireo izay tsy hanohana ny foto-kevitry ny fahafahana. Tokony ho 73–72 taona talohan’i Kristy.
Nampiasa fivadihana, vonoan’olona sy fiokoana i Amalikià mba ho tonga mpanjakan’ny Lamanita—Ratsy sy lozabe kokoa noho ny Lamanita ny mpiendaka Nefita. Tokony ho 72 taona talohan’i Kristy.
Nambosy ny Lamanita hanohitra ny Nefita i Amalikià—Nanomana ny olony hiaro ny foto-kevitry ny Kristiana i Môrônia—Nifaly tao amin’ny fahafahana sy ny fahalalahana izy ary nanjary lehilahy maherin’ Andriamanitra. Tokony ho 72 taona talohan’i Kristy.
Tsy nahafaka ny tanàna mimandan’i Amônihà sy i Noà ny mpanani-bohitra Lamanita—Nanozona an’ Andriamanitra i Amalikià ary nianiana ny hisotro ny ran’i Môrônia—Nanohy ny fampaherezana ny fiangonana i Helamàna sy ny rahalahiny. Tokony ho 72 taona talohan’i Kristy.
Nanamafy ny tanin’ny Nefita i Môrônia—Naoriny ny tanàna vaovao maro—Ady sy faharavana no nianjady tamin’ny Nefita tamin’ny andron’ny faharatsiany sy ny fahavetavetany—Noresen’i Teankoma i Môriantôna sy ny mpiendaka mpomba azy—Nodimandry i Nefihà, ary i Pahôràna zanany lahy no nipetraka teo amin’ny toeram-pitsarana. Tokony ho 72–67 taona talohan’i Kristy.
Nikatsaka ny hanova ny lalàna sy hanangana mpanjaka ny mpomba ny mpanjaka—Notohanan’ny feon’ny vahoaka i Pahôràna sy ny olona afaka—Nanery ny mpomba ny mpanjaka hiaro ny taniny i Môrônia, raha tsy izany dia novonoina ho faty izy—Namabo tanàna mimanda maro i Amalikià sy ny Lamanita—Nanosika ny fananiham-bohitry ny Lamanita i Teankoma sy namono an’i Amalikià tao amin’ny lainy. Tokony ho 67–66 taona talohan’i Kristy.
Nandimby an’i Amalikià ho mpanjakan’ny Lamanita i Amôrôna—Nitarika ny Nefita tamin’ny adim-pandresena tamin’ny Lamanita i Môrônia, i Teankoma ary i Lehia—Nalaina indray ny tanànan’i Mioleka, ary novonoina i Jakoba ilay Zôramita. Tokony ho 66–64 taona talohan’i Kristy.
Nampiasaina hanamafy ny tanànan’i Soafeno ny sambobelona Lamanita—Nanome vahana ny fandresen’ny Lamanita ny fisaraham-bazana teo anivon’ny Nefita—Nandray ny fibaikoana ny zatovolahy roa arivo avy tamin’ny vahoakan’i Amôna i Helamàna. Tokony ho 64–63 taona talohan’i Kristy.
Nifampiraharaha i Amôrôna sy i Môrônia mba hifanakalo sambobelona—Nitaky ny hiesoran’ny Lamanita sy ny hampitsaharany ny fanafihany mahafaty i Môrônia—Nitaky ny hametrahan’ny Nefita ny fiadiany sy ny hahatongavany ho olom-pehezin’ny Lamanita i Amôrôna. Tokony ho 63 taona talohan’i Kristy.
Nandà ny hifanakalo sambobelona i Môrônia—Nambosiana ho tonga mamo ny mpiambina Lamanita, ary nafahana ny babo Nefita—Nalaina tsy nisy ra latsaka ny tanànan’i Gida. Tokony ho 63–62 taona talohan’i Kristy.
Nandefa taratasy ho an’i Môrônia i Helamàna, nitantara ny toetoetry ny ady tamin’ny Lamanita—Nahazo fandresena lehibe tamin’ny Lamanita i Antipo sy i Helamàna—Niady niaraka tamin’ny hery mahagaga ny zatovolahin’i Helamàna roa arivo, ary tsy nisy maty taminy. Andininy 1, tokony ho 62 taona talohan’i Kristy; andininy 2–19, tokony ho 66 taona talohan’i Kristy; ary andininy 20–57, tokony ho 65–64 taona talohan’i Kristy.
Nitantara ny nahazoana an’i Antiparà sy ny filavoan-defona ary tato aorian’ny fiarovana an’i Komenia i Helamàna—Niady tamin-kerim-po tokoa ny Amônita zatovony; naratra avokoa izy ireo nefa tsy nisy maty—Nitatitra ny fandripahana sy ny fandosiran’ny babo Lamanita i Gida. Tokony ho 63 taona talohan’i Kristy.
Nahafaka ny tanànan’i Mantia tamin’ny tetik’ady i Helamàna, i Gida ary i Teômnera—Niesotra ny Lamanita—Notsimbinina ny zanakalahin’ny vahoakan’i Amôna noho izy ireo niorina mafy tamin’ny fiarovana ny fahafahany sy ny finoany. Tokony ho 63–62 taona talohan’i Kristy.
Nangataka an’i Pahôràna i Môrônia mba hanamafy ny tafik’i Helamàna—Nahafaka ny tanànan’i Nefihà ny Lamanita—Tezitra tamin’ny governemanta i Môrônia. Tokony ho 62 taona talohan’i Kristy.
Nitaraina tamin’i Pahôràna ny amin’ny fanaovan’ny governemanta tsirambina ny miaramila i Môrônia—Namela ny marina hovonoina ny Tompo—Tsy maintsy nampiasa ny heriny sy ny fomba rehetra ny Nefita mba hanafaka ny tenany tamin’ny fahavalony—Nandrahona ny hiady amin’ny governemanta i Môrônia raha tsy vatsiana fanampiana ny miaramilany. Tokony ho 62 taona talohan’i Kristy.
Nolazain’i Pahôràna an’i Môrônia ny amin’ny fikomiana sy ny fiokona tamin’ny governemanta—Nalain’ny mpomba ny mpanjaka i Zarahemlà ary niandany tamin’ny Lamanita izy—Nangataka ny fanampian’ny miaramila i Pahôràna hanoherana ny mpikomy. Tokony ho 62 taona talohan’i Kristy.
Nandeha tany an-tanin’i Gideôna i Môrônia mba hanampy an’i Pahôràna—Novonoina ho faty ny mpomba ny mpanjaka izay nandà ny hiaro ny taniny—Nahazo indray an’i Nefihà i Pahôràna sy i Môrônia—Nikambana tamin’ny vahoakan’i Amôna ny Lamanita maro—Namono an’i Amôrôna i Teankoma ary novonoina izy avy eo—Natosika hiala ny tany ny Lamanita, ary naorina ny fandriampahalemana—Niverina tamin’ny asa fanompoana i Helamàna ary nanorina fiangonana. Tokony ho 62–57 taona talohan’i Kristy.
Nandray ny fitanana ny rakitsoratra masina i Siblôna ary tato aoriandriana i Helamàna—Nandeha nankany amin’ny tany andafiavaratra ny Nefita maro—Nanamboatra sambo i Hagôta, izay niainga nankany amin’ny ranomasina andrefana—Nandresy ny Lamanita tamin’ny ady i Môrônihà. Tokony ho 56–52 taona talohan’i Kristy.